Kismaayo News » Wadaninimadu ma wax loo dhashaa mise waa wax la isku barbaariyo? WQ Abdihakin Asir
Wadaninimadu ma wax loo dhashaa mise waa wax la isku barbaariyo? WQ Abdihakin Asir
Waxaa kaloo aad u badanaaya in qofka dhalinyarada ah uusanba u heysan in horumarka wadankaan uu isga xil ka saaran yahay. Waxa uu mar kasta u maleynayaa inuu jiro qof kale oo arintaas laga sugaayo. Waxaad u maleysaa in isaga laga qaaday masuuliyadaas lana yiri adiga wax xila ah kaama saarna ee danahaada qabso koley dadbaa wadankaan wax ka qaban doono. Waxeyna taasi na dhaxalsiisay mida aan maanta ku jirno oo ah mid aan loo sii dhulqaadan karin.